Zetarmold unotanga kuita injectcion anoumba nokuti X-makumbo anoonekwa nokukurumidza
by pamusoro 19-03-19
2019-3-19 Good nhau! Nhasi isu chete vakapfuura wechitatu-party fekitari odhita kwenguva nakisa inotonhorera chirongwa ainzi X-negumbo. Chirongwa ichi chiri kunyanya yakagadzirirwa kudzivirira vashandi makumbo panguva kushanda kwacho. Nekuti mapurasitiki ichi X-makumbo anoonekwa anogona kukuita sokuti akagara pasi paunotonona. chigadzirwa ichi chakagadzirirwa ...
Zetarmold chengeta zvakanaka achimhanya Audi motokari jekiseni rakaumbwa celling rambi furemu
By 2019-3-19, Audi motokari celling rambi puranga kwave kuitwa jekiseni kuumbwa zvakanaka muna Zetarmold kwemakore 5 years. Kubatsira nokuramba kwekuva inoshanda kugadzira, Zetarmold chakashongedzera robhoti kuti kwaita ejection hurongwa. Zvichakadaro Zetarmold mushandi anochengeta chikamu ose kubva muchina nechokwadi zviri Cle ...
Plastic Parts , Jekiseni paaivaumba Danho, Jekiseni Kunoumbwa Plastic Container, Jekiseni Parts Kunoumbwa, Injection Molding, Overmolding jekiseni Kuumbwa,